Mogadishu Journal » 2019 » September » 23
Mjournal :-Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo goor dhow shir jaraa’id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa eedeyn u soo jeediyay Madaxweyne Farmaajo iyo Ra’iisul Wasaare Kheyre. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo haatan hogaamiya mid...
President Mohamed Farmaajo and Prime Minister Hassan Khaire are driving the country in the wrong direction and entrenching dictatorship, former president Sheikh Sharif Ahmed has said. Addressing the media Monday in Mogadishu, Sharif said it was ‘unimaginable’ that the two leaders...
Mjournal :-Inku dhow toban carruur ah ayaa ku dhimatay konton kalana waxaa ka soo gaaray dhaawacyo markii uu ku soo dumay mid kamid ah qolalka ay ardeyda wax ku bartaan, Iskuul ku yaalla magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Taliyaha booliska Nairobi George Sed iyo xildhibaan laga...
Mjournal :-Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo maanta warbaahinta kula hadlay Magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dowladda dhexe ee Soomaaliya ay ku xadgudubtay dastuurka dalka. Sheekh Shariif ayaa ku tilmaamay Sababtii loogu diiday Kismaayo mid baalmarsan...
Mjournal :-Hey’adda Duulista Hawada Soomaaliya ayaa soo saartay manta mar kale amar gebi ahaanba lagu hakiyay duulimaadyadii tegi jireen Kismaayo laga bilaabo maanta oo ku beegan 23 September illaa 26 September 2019-ka. Amarkan ka soo baxay hay’ada duulista hawada Soomaaliya ayaa...
Mjournal :-Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo oo ka qeyb galaya Meertada 74-aad ee Golaha Guud ee Qaramada Midoobay ayaa goor dhaw gaaray magaalada New York ee dalka Mareykanka, waxaana halkaasi kusoo...
Mjournal :-Ururka la baxay dowladda islaamka ee Daacish ayaa soo bandhigay sawirada dagaallamayaal ku hubaysan qoryaha fudud islamarkaana ay sheegeen in ay tababar ku qaadanayan xero ciidan oo ku taalla buuraleyda Galgala ee gobolka Bari. Ururka ayaa ku baahiyay Sawirraddan bar...